Pollinosis - kurapa
Pollinosis inorwara zvirwere zvinowanikwa mumwaka. Kana munhu aine rhinitis seanopindira kumaruva emiti, maruva ayo anoparadzirwa nemhepo. Nemhaka yehuwandu hwemaharagen, rhinitis inonyanya kuitika panguva yemaruva - munguva yechando uye yezhizha. Varwere vanotambura nefivha fever vanoona zvinhu zvakawanda zvinokanganisa, izvo zvinotungamirira pakuderera kwehupenyu hwehupenyu.
Kakawanda mapureni anoratidzwa nehupfumi, asi zviitiko zvefivha, chills, conjunctivitis (kubvongodza kwemaziso), allergic dermatitis , kusagadzikana uye kuneta, uyewo kukura kwepfupa mumutsipa uye kukwezva, hazvishamisi.
Mumatambudziko akaoma, kuvhara muviri kunogoneka, uye ichi ndicho chiratidzo chinonyanya kuipa chepollinosis.
Kazhinji, maruva anokanganiswa nechando nekuda kwekufanana kwezviratidzo.
Nzira yekurapa hay fever?
Pollinosis inoda kurapwa kwakaoma, izvo, zvisinei, hazviwanzovimbisi 100% kupora, uye mhinduro inobva kune iyo ingangoratidzwa chete nekuderera kwechinguva kwezviratidzo.
Chokutanga pane zvose, kurapwa kunosanganisira kutora mishonga. Zvinodhaka kubva kuhutachiona - izvi zvinosanganisira antihistamines, kana mumatambudziko makuru ehommonal - Prednisolone. Kuti kuderedza zviratidzo, haisi nguva yakakwana kutora antihistamine, uye naizvozvo murwere anomanikidzwa kushandisa nguva dzose vasoconstrictive madonsi kana nasal sprays kubvisa mucosal edema uye kuita kuti kufema.
Kurapa kwepollinosis neimbaopathy
Mishonga yeHomeopathic inowanzosangana nemashoko asinganzwisisiki nevarapi. Asi maitiro anoratidza kuti mune dzakawanda zviitiko ivo vanobudirira kupfuura mishonga yemakemikari akawanda.
Somuenzaniso, muGermany rakasimba Heel ine mushonga wekurapa rhinitis - Agnus Cosmoplex C (mune ma makhandisi). Nekurapa kwechirwere chemaviri, lymphomyosot (yakafanana nemadonhwe) anogona kuva anoshanda, izvo zvinobvisa kuvhunika, kunowedzera hutachiona uye kunopisa lymph.
Asi chinodhaka chikuru chinorwisana nekambani yeHeel yeEuforbium compositum Nazentropfen C. Mishonga iri mumhando yepiritsi inopa anti-edematous, anti-inflammatory, antiviral, immunocorrecting uye anti-allergenic action.
Kurapa kwepollinosis nemishonga yevanhu
Zvirwere zvevanhu hazvina kubudirira pakurapa mishonga, asi dzinobatsira kuunza hutachiona hwevanhu mukuronga, nekuda kweiyo, zvichida, chirwere chichapera.
Saka, tora chetatu chemononi zuva rega rega, uye unwe hafu yegirasi ye nettle decoction. Muto we nettle haufaniri kutorwa nehuprombosi uye kuwedzerwa simba.
Iyo yakanakisisa kudzivirira kwepollinosis ndiyo yakananga immunotherapy, iyo inogona kunge isina kupa zvinodiwa. Iyi nzira inofanira kuitwa kana mumakore ekupedzisira yechando, kana muchando, apo mbeu dzisingasviki. Pakupedzisira, murwere anopa kuongororwa ropa kuti awane iyo, uye kubva ipapo, zvichibva pane idzi data, zvigadzira nzira inenge ine pevhu, inokonzera mishonga. Ichi chemishonga chinoshandiswa maererano nechirongwa chinotarisirwa kune munhu pasi pemutana, uye naizvozvo muviri unoshandiswa, uye zvinoratidzika hazvisimuki apo maruva anotanga.
Mouse fever - kuti ungadzivirire sei kune utachiona hunotyisa?
Chii chinonzi Actovegin chakashandiswa, uye nzira yekushandisa mhando dzose dzemishonga zvakarurama?
Ndinokwanisa here kugadzirisa hydrogen peroxide?
Irritable bowel syndrome - kurapwa
Nzira yekurapa arthrosis yetsoka pamba?
Protargol - kuumbwa
Dysbacteriosis zviratidzo uye kurapa
Nei maziso angu achiona?
Kubuda kwemigumisiro yejovo rwepafudzi
Plasmapheresis - zviratidzo uye zvinopesana
Loratadin - zvakafanana
Zvipfeko zvakanakisisa zveshangu
Sliding girazi tafura
Kukakavara nemuiti anotsvaga kukanganwa muimbi Keshe
Nechii chokufuka jasi?
Nzira yekukunda sei mhandara?
Maketeni mukicheni nemaoko avo
Eva Longoria zvakare akakurudzira makuhwa ekuzvitakura
Shish kebab kubva kune hove - mapoka ekutanga ezvokudya zvinonaka pane grill
Nzira yekusarudza sei kufamba nemotokari yemotokari?
WFD ne hysteroscopy
Vakadzi vanodzika pasi majokoni Moncler
Nguo yebhuruu nemarara
Sungai koo ne soda uye munyu
Jay Z ave mutungamiri munhamba yeGrammy kusarudzwa kwe 2018
Zvokunamata uye zvinhu zvenyama
Hofitol panguva yekuzvitakura - murayiridzo
Cheesecake kubva kuCottage cheese - mapepa anokurumidza uye akajeka ekubika kubika kweAmerica
Chii chinonzi mutsvuku chinorevei?